Linux Deepin: ငါမြင်ဖူးသမျှထဲမှာအလှဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည် Linux မှ
ကိုယ့်ထွက်နေသေးတယ် မှတဆင့် webupd8 ၏ပစ်လွှတ်၏ Linux Deepin ၁၅အပေါ်အခြေခံပြီးတရုတ်ဖြန့်ဖြူး Ubuntu ကို 13.04 သုံးစွဲသူအားအသုံးပြုသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသည့်အရာတို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Look & Feel ပေးခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားသည် GNU / Linux များ.
သူတို့ငါ့ကိုမယုံဘူးလား အသစ်ဗီဒီယိုနှင့်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ရှုရန်ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်ုပ်၌ iso handy မရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အနေနှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်။ မရပါ။
မြင်နိုင်သောအရာနှင့်စတင်ရန် linux နက်ရှိုင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားသော Desktop Environment ကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည် GNOME SHEll ကိုအစားထိုးပြီးအမည်ပေးခဲ့သည် Deepin Desktop Environment (DDE) ။ ကျွန်ုပ်တို့အနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်သည် OS X ကို, Windows 7, သစ်ကြံပိုးခေါက် y KDE။ နှင့်သက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုသည် Compiz.
File Manager, Audio Player နှင့် Video Player တို့အတွက်မည်သည့် application ကိုအသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ISO ကိုသိလိုစိတ်နှင့် download ပြုလုပ်လျှင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်ချင်ပါသည်။
သင် download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် linux နက်ရှိုင်းသည်။, သင်ဤ link မှာ၎င်း၏ 32 နှင့် 64 bit ဗားရှင်းအတွက်လုပ်နိုင်:
Linux Deepin ကို download လုပ်ပါ
ငါ iso ကို download လုပ်ခွင့်ပြုလျှင်ငါပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလိမ့်မည်ဟုသင်တို့ကိုငါကတိ။ 😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Linux Deepin - ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအလှဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်နိုင်တယ်
90 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါ့ကို DDE ဆိုတာဘာတွေစိတ်ဝင်စားမှာလဲ၊ သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ သူတို့ကအခြားအရာတစ်ခုခုအပေါ်အခြေခံပါသလား ::
ပထမတော့ပန်းရောင် linux XD ရှိ kde panel ကိုသတိရစေသည်
ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့ကတခြားအရာတခုခုအပေါ်မှာအခြေခံထားရမယ်။ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ofာန်ကြောင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ဒါဟာ Cinnamon လား၊ GNOME အတွက် Shell လားဆိုတာငါမသိဘူး။ ရိုးရိုးသားသားမသိဘူး။
ဆာဂျီယိုအီး Duran ဟုသူကပြောသည်
DDE သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ ကောင်းမွန်စွာအရောင်တောက်ပသည်၊ အရောင်တောက်တောက်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ Linux Deepin သည်စပိန်ကိုသာအထောက်အပံ့ပေးသော်လည်းအချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင် gtk အက်ပလီကေးရှင်းများသာမက DDE နက်ရှိုင်းသည့်စနစ်ဆက်တင်များ Kingsoft ရုံးကဲ့သို့အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာဖြင့်သာဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးခဏတာကြိုးစားသင့်သည်
Sergio E. Duránအားပြန်ကြားပါ
သင်စမ်းချင်သော ISO ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် (China, Ubuntu ကိုအခြေခံသည်စသည်ဖြင့်) ဤ distro နှင့်မနေပါ။ သို့သော်အလွန်ကြည့်ချင်သည်🙂
သငျသညျကျူးဘားထုတ်ကုန်အပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသော gringo ကဲ့သို့ဖတ် !!
အခုငါ pcmanfm အတွက်ကုဒ်စာရင်းစစ်ချင်တယ်၊ အဲဒါကိုတရုတ်လူမျိုးကဖန်တီးထားတယ်။http://wiki.lxde.org/en/PCManFM) ။ အစဉ်မပြတ်ငါသူ့ကိုမယုံကြည် !!
မင်းဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ ... သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်ဟေးသူငယ်ချင်း ... တရုတ်နဲ့ရုရှားကအနာဂတ်အတွက်ပဲ။ ငါသဘောကျပေမယ့်ပိုလန်လိုဘာပြောချင်တာလဲ။ ပြီးတော့အဲဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ?
အငြိုးမထားပါနဲ့၊ သင်မဟုတ်, အငြင်းအခုံ။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသို့မဟုတ် phobias လျော့နည်းခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်မွမ်းမံ။ အဆိုပါ distro အလွန်ကောင်းစွာလုပ်နေတယ်နှင့်အလွန်လှပသည်။ ဖက်သည်။
ငါယူအက်စ်အေသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောရုပ်ရှင်၏ကောင်းခြင်းဖြစ်သည့်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ... တရုတ်, ယူအက်စ်အေနှင့်ရုရှား, အားလုံးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအရာများရှိသည်, ဒါပေမယ့် ... ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးအနည်းဆုံးယူအက်စ်အေအတွက် (သင်တန်း၏အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့အင်္ဂလန်, ဂျာမနီ, ဂျာမနီ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုထောင်ချခြင်းသို့မဟုတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါ။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါရစေ၊ တရုတ်လား၊ ရုရှားမှာမင်းကသရုပ်ပြအသေးစားတခုခုကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်တာမျိုးလုပ်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။ ပြီးတော့အစိုးရကဆန္ဒပြသူတွေကိုလက်တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါထပ်ခါတလဲလဲ, တရုတ်နှင့်ရုရှား ((ငါဖော်ပြရန်မည်မဟုတ်ပါသောအခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့) သူတို့ကအစိုးရက "တည်ထောင်" သောအရာကိုထံမှကွဲပြားခြားနားထင်သောလူများကိုဖိနှိပ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်မယုံကြည်ပါဘူး။
၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် Gnome Shell ကိုအသုံးပြုသည်။ KZKG ^ Gaara ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှလာသည့်အရာအားလုံးကိုသံသယဖြစ်မိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမြင်အာရုံထက်သာလွန်သည်ကိုငြင်း။ မရပါ။
Webupd8 မှာသူတို့ပြောတာကသူက Gnome-Shell ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ Compiz ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Desktop Environment အသစ်ရဲ့ဇာစ်မြစ်ကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
ကောင်းမွန်သောနှုတ်ယူခြင်း .. အကယ်၍ သင် Compiz ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းတို့သည်များစွာသောအရာများကိုပြုပြင်မထားပါက GNOME Shell မဖြစ်နိုင်ပါ။
Deepin 12.06 မှာ Gnome shelizl နဲ့အတူတူပါ။ သူတို့ဟာ Nautilus တောင်မှလုံလောက်ပါပြီ၊
ဒါဟာ elementaryO လိုမျိုးဖြစ်သင့်တယ်။ သူတို့ဟာ gnome3 အတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင် shell ကိုလုပ်ခဲ့တယ်
၎င်းသည်တရုတ်ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏မိတ်ဖက်များဖြစ်သော GitCafe, Upyun, Opu နှင့်တရုတ်ရုံးသုံး suite WPS Office (Kingsoft ရုံး) တို့ကထောက်ပံ့သည်။
Kingsoft ရုံးကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ GTK အထောက်အပံ့နဲ့ကြည့်ရင် MS Office နဲ့တော်တော်ဆင်တူတဲ့အတွက်အဖေ့ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။
gtk ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ interface ထဲမှာရှိနေတဲ့တစ်ဝက်လောက်ကခက်ခဲလိမ့်မယ်။
ကံဆိုးပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Office နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် open source suite မရှိခြင်း၊ LibreOffice သည် Gnome နှင့် Kde enviromery များနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းနှင့် KOffice တွင်ခရီးရှည်သွားရန်ရှိသည်။
Apache ကိုလိုင်စင်ရပြီဆိုရင် openoffice ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်နေတာလဲ။
Ramón Torres ကိုပြန်ပြောပါ
Gtk နှင့် WPS Office တွင်ဘာပြproblemsနာတွေရှိသလဲ။
WPS Office အသစ်ကိုငါတွေ့ပြီ။ Ubuntu မှာတော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်။
ငါ Debian Wheezy မှာ Kingston Office ကို install လုပ်ထားတယ်။ သူ့ရဲ့ interface ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ သူတို့ကအဲဒါကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးစပိန်ဘာသာကိုတစ်ကြိမ်လုံးပြန်ဆိုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ် WPS ရုံးနှင့်ပြproblemနာမရှိပါ။ KIngsoft Gtk (Gnome) အထောက်အပံ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူပြောခဲ့တဲ့ Sergio E. Duránရဲ့ပထမဆုံးမှတ်ချက်ကြောင့်ငါပြောတာပါ။
distrowatch ၏အဆိုအရ၎င်းသည် DE, Deepin DE ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Gnome3ကိုအခြေခံသည်။ ဂီတအစီအစဉ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ netbook ဖန်သားပြင်မှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။http://www.linuxbsdos.com/2012/08/07/linux-deepin-12-06-review/) ကျွန်ုပ်၌ရှိသကဲ့သို့ (ဖန်သားပြင်မှခလုတ်များပျောက်ကွယ်သွားသည်) ကဲ့သို့၎င်းသည်မသင့်တော်ပါ။ Ubuntu ကိုအခြေခံတာဒါမှမဟုတ်တရုတ်ကလာတာလား၊ ယနေ့ ၀ ယ်တာအားလုံးနီးပါးပေါ့။ Linux ပဲ။
@ KZKG ^ Gaara နှင့် @ medina07 သူတို့ကတရုတ်မှလာတာအားလုံးကိုမယုံသင်္ကာဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ သူတို့ PRISM အကြောင်းဘာမှမဖတ်ဘူးလား။ အကယ်၍ သင့်မှာဂူဂဲလ် (သို့) Facebook အကောင့်များရှိတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကတရုတ်ထက်အမေရိကန်မှလာသည်ဟုအရာအားလုံးကိုပိုမိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်၏။
Linux Deeping အကြောင်းပြောနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက bandwagon ကိုဆက်သွယ်တဲ့ DE တစ်ခု ... ငါသတိမပြုမိဘူး၊ ငါ့ကို KDE ကနေပြောင်းချင်တဲ့အသစ်ကိုဘာမှမပြောဘူး။
ကောင်းပြီကွာခြားချက်သိသာသည်။ ယူအက်စ်အေသည်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူတို့ဘာလုပ်သည်၊ မလုပ်သည်ကိုသင်ရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားတို့တရုတ်မှာ PRISM မရှိဘူးလို့ထင်လားကြည့်ရအောင်။ အဲဒီအစား၊ သူတို့မှာအများကြီးပိုဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုပဲတိုင်တန်းပါစေ၊
စကားမစပ်အမေရိကန်ဟာအနည်းဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုရှိပေမယ့်တရုတ်ဟာသူတို့တီထွင်ကြံစည်မှုကနေသူတို့လုပ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုခိုးယူဖို့ရည်စူးထားပါတယ်။ Apple ကပြုလုပ်သည့်အရာနှင့်ဆင်တူသည်
ငါနှစ်တိုင်းတရုတ်ပြည်ကလာပြီးသွားကြတယ်၊ အခုငါစပိန်မှာနေတယ်။ တရုတ်ကအာဏာရှင်စနစ်ပဲ။ ငါနားမလည်ဘူး၊ မီဒီယာတွေကပြောတာကြောင့်လား။ ငါမချမ်းသာဘူး၊ ငါ့ရပ်ကွက်ထဲမှာငါဖိတ်ခေါ်တယ်၊ မင်းငါ့ကိုပြောမယ်
ဟုတ်ပါတယ်။ တရုတ်သည်၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းလူသိများသည် (၎င်း၏မိတ်ဆွေမြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့) မင်းပြောတာကိုမင်းဘယ်လောက်ရှက်သလဲဆိုတာငါမသိဘူး။
ဆန္ဒပြသူတိုင်းသည်နေ့တိုင်းသဲလွန်စမရှိဘဲ“ ပျောက်ကွယ်သွား” ကြသည်။ နုံသူအချို့ကဆန္ဒပြမှုများမရှိသောကြောင့်ပြည်သူတို့သည်ထိုတိုင်းပြည်တွင်လွတ်လပ်မှုကိုခံစားနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဒါကဘယ်လောက်လေးနက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ရင်ရယ်စရာပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုမလွှတ်မီအနည်းငယ်ကိုရှာကြည့်ပါ။ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုသင် (ဒါမှမဟုတ်မရှာချင်ဘူး) မရှာဘူးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါ။ Tian'an ကမင်းနဲ့ရင်းနှီးနေသလား။ အဲဒီမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်သေတယ်ဆိုတာမင်းသိသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဘာမှမဖြစ်၊ အလင်းပေါ်မလာတဲ့အရာတွေနဲ့ယှဉ်တယ်။
ရှင်းလင်းသော။ သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သူမျှဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခင်ဗျားရဲ့ဇာတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမခံစားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုခရီးစဉ်များထဲမှတစ်ခုမှာသင်“ ခက်ခဲသောလမ်း” ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
နိုင်ငံအားလုံးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးစနစ်များတွင်ကောင်းမွန်သောအရာများနှင့်ဆိုးသောအရာများရှိသည်။ အစွန်းရောက်အရင်းရှင်စနစ်နှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒအစွန်းရောက်မှုနှစ်ခုလုံးသည်ဆိုးရွားသည် (အမေရိကန်နှင့်တရုတ် / မြောက်ကိုရီးယား) ။
တီယာနန်မန်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့်, ငါပြောလွန်းလိမ့်မည်, ဒါကဒီကနေ့မီးလောင်တိုက်သွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများအတွက်ယနေ့ဂျာမနီကိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့တူတယ်
အကယ်၍ လွတ်လပ်ခွင့်နိုင်ငံသည်လူ့အခွင့်အရေးကိုအလွန်လေးစားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်သောကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင်ကိုယ်စားလှယ်များမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုတိုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးပေ (ကမ္ဘာပေါ်ရှိတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံ) ။ ထိပ်ဆုံးမှအနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှဖြစ်ပျက်နေသောလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများကိုမေ့ပျောက်။ သူတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုခိုးယူရန်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်ကြောင်းတီထွင်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသမ္မတများပိုမိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ လာပါ၊ ညစ်ညမ်းသောတိုင်းပြည်၊ ညစ်ပတ်သောတိုင်းပြည်၊
အခြားသူများမှာအမှန်တရားကိုမမြင်ဘဲဂရန်းဒါဒါအားထောက်ခံအားပေးသူများမဟုတ်သောကြောင့်လွတ်လပ်မှုသည်တိုင်းပြည်၏အရင်းရှင်စနစ်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၏အဆိုးဆုံးထက်ပိုပြီးကိုယ်စားပြုသောအခါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျဆင်းလျက်ရှိ၏။ သို့သော်ထိုအရာကိုမြင်လို။ ကယ်တင်ရှင်များကိုသူတို့မတွေ့မြင်လိုသူများရှိသည်။
@ anonymous gringos ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါတို့အိမ်မှာဆက်နေချင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုမျှတအောင်လျစ်လျူရှုပြီးအမြဲတမ်းအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်အနောက်ကမ္ဘာ၏အခြေခံစံနှုန်းများဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းအမှားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အနောက်တိုင်းမဟုတ်သောအမှားများထက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ငါတို့၏ဘဝသည် gringo တွင်လှည့်ပတ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွန့်ဆုတ်စွာဝန်ခံကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အပေါ်ညည်းညူမြည်တမ်းကြသည်။ သို့သော်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝပုံစံ၊ တေးဂီတ၊ ဘာသာစကား၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်သူတို့၏ဘုံအသုံးအနှုန်းများကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ကိုးကွယ်ကြသည်။ gringadas "ထူးဆန်းတဲ့" တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့အခါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူစိမ်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏တစ်သက်တာ gringo များနှင့် ပို၍ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကြောင့် gringo ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များဖြစ်လိုကြသည် (ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြွက်များဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့ရန်ကြိုးစားသည်) ။ မကောင်းတာကိုသိတာကမကောင်းတာကိုသိတာထက်မကောင်းဘူးလို့ငါတို့ခံစားရတယ်။
ယနေ့အချိန်အထိတရုတ်နိုင်ငံတွင်လူများသည်သတ်ဖြတ်ခြင်းအတွက်သာမကအခွန်ရှောင်တိမ်းမှုအတွက်ပင်ကွပ်မျက်ခံရသည်။ ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးမရှိ၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်၊ YouTube ဗီဒီယိုများနှင့်ပိတ်ဆို့ထားသောအခြားစာမျက်နှာများမရှိပါ။ အစိုးရကတရုတ်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်သူ၏စီးပွားရေးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးဆင်းရဲသားတရုတ်များကိုဥရောပထက် ၁၀ ဆလျော့နည်းသည်။
@ pandev92 သင်ပြောခဲ့သည့်လွတ်လပ်မှုမရှိသေးပါ၊ အကြောင်းမှာတရုတ်သို့ ၀ င်ရောက်လာသောကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်တရုတ်လူမျိုးများပါ ၀ င်မှုအားခွင့်ပြုရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာကုမ္ပဏီတွေဖွင့်မယ့်အစားမင်းတို့ပြောတဲ့အရာမှာသူတို့လုပ်တာကတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ငှားရမ်းတာပဲ။ အလုပ်သမားတွေအဲဒီမှာကျွန်ဖြစ်နေတာကိုဂရုမစိုက်ဘူး။
စင်စစ်အားဖြင့်လွတ်လပ်မှုသည်တည်ရှိနေသည့်တစ်ခုတည်းသော "လွတ်လပ်မှု" ပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များဖြင့်လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းသို့နိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းများ ၀ င်ရောက်ရန်ခက်ခဲစေခြင်း (အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသောသူများ မှလွဲ၍) ။
တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်။ သင်၌ရှိသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်ကကွဲပြားတယ်။ ယူအက်စ်အေမတည်ရှိပါဘူးနှင့်တရုတ်နှင့်ရုရှားအထက်ဖြစ်ကြသည်။ အစာမစားသောလူ ဦး ရေသန်း ၅၀ ရှိသောယူအက်စ်အေသည်သွားနေသည်။ CNN မှထွက်ခွာပါ။ ငါသည်လည်းတရုတ်နှင့်ရုရှားသို့မကြာခဏသွားလေ့ရှိသည်၊ သူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာများဖြစ်သည် !!! ပြီးတော့အမေရိကန်မှာဒီမိုကရေစီဆိုတာမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးတော့လူတစ်ယောက်က CACA COLA ဖန်ခွက်ထဲမှာပိုးဟပ်တစ်ခုကိုသတင်းပို့ချင်တဲ့အခါအဖမ်းခံရတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းက Bombama အကြောင်းမကောင်းပြောရင်မင်းလွတ်သွားပြီ။ မင်းမှာလှပတဲ့ဒီမိုကရေစီအယူအဆရှိတယ်။ ဂရုစိုက်ပါ ... ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲ !!!
ဒီမိုကရေစီလား၊ အာဏာရှင်လား၊ သူတို့ဟာသူတို့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုစူးစမ်းကြမယ်။ ဒီမိုကရေစီဟာလုံး ၀ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်အာမခံချက်မဟုတ်ဘူး။ ငါအာဏာရှင်စနစ်ကိုခုခံကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီကိုရည်ညွှန်းတဲ့တန်ဖိုးအတော်များများဟာအတိုချုပ်ပြောရရင် ချီလီမှာပြောတဲ့အတိုင်းတရုတ်တွေဟာ "ကူကူကူကူကူတာ" တွေပါ။ သူတို့က ၁၈ မိနစ်ကြာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်အသွားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဆောင်းပါးတပုဒ် (၂၀၁၀ သို့မဟုတ် ၂၀၁၁ ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါမမှတ်မိဘူး) နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
သူတို့ "လိုအပ်သည်ဟုယူမှတ်သည်" ဆိုသောသူများသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားဖြင့် "သူလျှို" လုပ်နိုင်သူများဖြစ်ပြီး၊ အမှန်မှာစကားလုံးမှာအတိုဆုံးဖြစ်ပြီး "ထိန်းချုပ်မှု" ဖြစ်သည်။
အချို့သောရှုထောင့်များမှဒီမိုကရေစီသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးများနှင့်အခြားအရာတစ်ထောင်သည်၎င်းကိုပူးတွဲထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း application တစ်ခုတွင် spyware များရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်သန်းပေါင်းများစွာသောအခမဲ့ကုဒ်လိုင်းများအကြားမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးခြင်း၊ နှစ်ပေါင်းသတိမပြုမိ
ငါတရုတ်သို့ခရီးစဉ်နှစ်ခုသွားပါပြီ။ ဤကဲ့သို့သောနေထိုင်မှုကိုနိုင်ငံများက ပို၍ ပြောနိုင်သည်။ ဂွမ်ဇူးသည်ကျွန်ုပ်သွားရောက်ဖူးမြော်ရသောစီးပွားရေးအရမြို့တော်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်လှပပြီးဖွဲ့စည်းထားခြင်းခံရသည့်နိုင်ငံအနည်းငယ်တွင်သင်သည်လက်နက်မဲ့ရဲတစ်ယောက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထောင့်တိုင်း။ ငါ၌တရုတ်မိတ်ဆွေအနည်းငယ်ရှိသည်။ အမှန်တရားမှာသူတို့ပြောသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းအလွန်နိမ့်သည်။ ကျောင်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရင်းရှင်များ၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများကအရေးမကြီးပါ။
နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယွမ်စျေးနှုန်းတိုးတက်လာပြီး၊ ၎င်း၏စီးပွားရေးတိုးတက်လာကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊ သင်မှားလားမှားလား။ ငါမယုံဘူး
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတိတ်ကာလမှသင်မစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ၊ တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင်လိုချင်သည့်အရာကိုပြောဆိုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရေနံနှင့်နယ်မြေအတွက်စစ်ပွဲများကိုအစပြုခဲ့သူများသည်တရုတ်လူမျိုးများမဟုတ်ကြကြောင်းသတိရပါ။ ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏“ အမေရိကန်” သူငယ်ချင်းများဟုမိမိတို့ကိုယ်ကိုခေါ်ဆိုကြသောကြောင့်ကျန်အမေရိကတိုက်သည်သူတို့အတွက်အမှိုက်သရိုက်များဖြစ်သည်။
မြင်ချင်သောလူကန်းသည် သာ၍ မျက်စိကန်းသည်မဟုတ်။ အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ သင်သည်ထိုအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိမရှိသိနိုင်ရန်နှစ်အနည်းငယ်မျှနေပါ။
အာဏာရှင်စနစ်အားဒီမိုကရေစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားတွေရှိပါတယ်။ အဓိကတစ်ခုမှာပါဝါတွင် ALTERNANCE ဖြစ်သည်။ အတိအကျဒီမိုကရေစီ၏အကြီးမားဆုံးချိုးဖောက်မှုများသည်အာဏာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့သူများနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နှစ် ဦး စလုံးသည်အမေရိကန်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးသမ္မတများ၌အနည်းဆုံး ၈ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်ကန့်သတ်ထားသည် (၄ င်းတို့ကိုထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်လျှင် ၄ နှစ်တာကာလ) ။ သင့်နိုင်ငံမှသူများသည်မည်မျှနေထိုင်ပြီးသို့မဟုတ်သူတို့နေထိုင်လိုကြမည်နည်း။
ဒီမိုကရေစီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူး၊ အာဏာရှင်စနစ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပါစေ။ နှစ် ဦး စလုံးသည်နိုင်ငံရေးသမားများအားဝေဖန်ကြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နေထိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ထက်များသောအားဖြင့်ပေါ်လာသည်။
Pretty ?, မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါလေးစားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်အဲဒါဟာ vista ၀ င်းဒိုးတစ်ခုရဲ့ပုံပဲ .. အဲ့ဒီပြတင်းပေါက်အပြာရောင် ၀ င်းဒိုးတွေနဲ့ငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းပုံရတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်နားလည်သောထိုအရောင်များကို be ပြောင်းလဲနိုင်သည်😉
သေချာတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့အဲဒါတွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရင်၊ မင်း post မှာဟောပြောတာကသိပ်မလှပါဘူး။
ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ကြဘူး၊ လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အရသာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒီပုံတူမျိုးပွားတဲ့အမြင်၊
အဓိကအချက်ကတော့ငါပြောချင်တာကသူတို့ကပုံမှန်ဆောင်ပုဒ်ကိုမကြိုက်တဲ့ pitas လိုသုံးစွဲသူများအတွက်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဒါကသိပ်ကောင်းတယ်။
အပြာရောင် windowseros? ဟားဟားဟမ်း၊ KDE ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့အရောင်ကဘာလဲ။
ငါအနားယူသည်။ တရုတ်၊ Ubuntu၊ Güindouseroအပြာရောင် ... ဘက်လိုက်မှုပေါက်ကွဲတော့မည်။ * Mint မှထွက်ပြီး Crunchbang ကိုရိုက်တော့မည်။
Suse မှ KDE သည်အစိမ်း၊ Kubuntu အပြာရောင်၊ Fedora တွင်အခြားအပြာရောင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘလူးနှင့်အပြာရောင်ရှိပြီး၎င်းသည်မြင်ကွင်းဟုပြောသူအသုံးပြုသူနှင့်သဘောတူသည်။ တကယ်တော့အရောင်ရောစပ်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။
ကျွန်ုပ်၏စိတ်စွန်းကွက်မှုကားအဘယ်နည်း KDE ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအရောင်သည်အပြာရောင်ဖြစ်သည်ဟုပြောပါ။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင် http://kde.org/ * ... အပြာရောင်မြင်ရဆဲ ... o_0
ဒါကတရုတ်လိုပဲစိတ်စွန်းကွက်မှုမဟုတ်ဘူး။ အနောက်နိုင်ငံများသည်တရုတ်လူမျိုးများအတွက်ပင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုပင်မသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂျပန်၌ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အကြောက်လွန်ရောဂါနှင့်ပြည့်နှက်နေသောတရုတ်နိုင်ငံသားများစွာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှု၏ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ကြသောကြောင့်သူတို့၏ "ကိုယ်ပိုင်" အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းပြောပြသည် ကွန်ပျူတာများကောင်းပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မလိုသူတို့ကြိုက်တာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်တယ်။
၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် PRISM နှင့်ပတ်သတ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်သုံးသူတစ် ဦး မှပြောကြားသည်။ xD
ပြီးတော့ငါအပြည့်အဝခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ မထင်ဘူးလား၊ ငါကိုယ်တိုင်လည်းကွန်ပြူတာကိုစုစည်းထားတယ်၊ OSX ကိုဖက်ရှင်အတွက်မသုံးဘူး၊ ငါသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အတွက် Arch Linux ကို dual boot မှာ install လုပ်ထားတယ်၊ အမှိုက်သရိုက် XD အဖြစ်အခြားစနစ်များ
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အလုပ်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်လိုချင်တာကိုအပြည့်အစုံထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီပုံရသည်၊ သင်သည်သင်၏စွပ်စွဲချက်ကိုပယ်ချခြင်းအပေါ်သင်၏ဝေဖန်မှုကိုအခြေခံပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်သည်ခွင့်ပြုသည့်အရာတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုသည်။ တရုတ်ကသူလျှိုမဟုတ်ဘဲအမေရိကန်ကထောက်လှမ်းသည်။
တရုတ်တွေဟာတရုတ်မဟုတ်တဲ့သူလျှိုတွေကိုစိတ် ၀ င်စားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သံသယဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့၊ ဒီဟာသံသယဖြစ်စရာတစ်ခုခုရှိရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။
တရုတ် (သို့မဟုတ်သူတို့၏အစိုးရ) သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တရုတ်ဆက်ဆံရေးမရှုပ်ထွေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေးမိသည်မှာတရုတ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်နှင့်အမျှ“ သံသယဖြစ်ဖွယ်အရာများ” မရှိကြောင်းသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်၊ သူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်လေလေ၊ သူတို့ပိုခံစားလေလေ၊ ကုဒ်နံပါတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ယူရလေလေဖြစ်သည်။
မေးခွန်းအနည်းငယ် - Windows Vista ကိုတကယ်အသုံးပြုခဲ့သလား။ Windows Vista ကိုကောင်းမွန်စွာ run ရန်မည်သို့ကြိုးစားရမည်နည်း။ Windows Vista သည် Windows7နှင့်မည်သို့ဆင်တူသနည်း။
ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုတွင် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နီးကပ်စွာတွေ့မြင်ရသည်။ fragmentation အဆင့်သည်နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဒါကဒါကိုသင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ဒါဟာအပိုင်းလိုက်ခွဲခြားခြင်းမဟုတ်၊ မတူကွဲပြားမှုနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းနဲ့သာသက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရှုထောင့်တစ်မျိုးတည်းသာလျှင်ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်၊ နေရာတိုင်းမှာမတူကွဲပြားမှု XD!
ကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ Windows7လိုပဲဒါပေမယ့်တရုတ်ကပိုပြီးအေးပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၂၀ ရာစုကဂျပန်တွေနဲ့ဆင်တူတယ် (သူတို့ဟာအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြပြီးအခုသူတို့ကဈေးကွက်မှာခေါင်းဆောင်တွေပါ။ ) ။
ယခင်ကအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောသူတို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လည်းအလားတူပင်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောကွန်ပျူတာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ စတူဒီယိုများနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များကိုသူတို့ကြည့်ရှုပါ။
စိုးရိမ်စရာတစ်ခုမှာသူတို့၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (Huawei) သည်ရှေ့တန်းတွင်ရောက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ များစွာသောကုမ္ပဏီများ (တရားမ ၀ င်ကုမ္ပဏီများပင်) သည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မကောင်းသောတုပခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ ကံကောင်းတာကဒီမြင်ကွင်းကျယ်သည်ပိုကောင်းလာသည်။
ထို့ကြောင့်ငါပြောရမည်ဆိုလျှင်လက်ရှိတရုတ်၏မြင်ကွင်းကျယ်သည် ၂၀ ရာစုအတွင်းအထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကာလနှင့်ဆင်တူသည် (ကြည့်ရန်) ဂျပန်အံ့ဖွယ်).
Ehhh ... ဒါကိုအထီးဖြန့်ဝေဖို့ပဲထားခဲ့တာလား။
ကျွန်တော်ဒီ distro ကိုမစမ်းသပ်သေးပေမယ့်တကယ်ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးစုစည်းထားတာဖြစ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်တာလား။
ငါကြိုးစားပြီး Ubuntu ကိုအခြေခံပြီးအလွန်ကောင်းပါတယ် Ubuntu ကိုအခြေခံပြီးဒါပေမယ့်သူ့ကိုယ်ပိုင် repos နဲ့။ W7 လိုပဲဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒါကတခြားအရာနဲ့တူတယ်။ compiz သည်ကျွန်ုပ်၏ကျေနပ်မှုအတွက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အောင်မြင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အမှန်တရားက Windows ကိုလေကိုပေးတာ၊ အရသာ၊ အရသာအတွက် (သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်အရောင်များ) အတွက်။
ဒီဇိုင်းသည် Rosa, Ubuntu နှင့် Elementary ရောနှောပြီးဆော့ဝဲစင်တာကဲ့သို့သောအခြားပရိုဂရမ်များနှင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်တူသည်။ ဒါဟာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။
ငါ D * မှာတွေ့ခဲ့တုန်းကဒီဟာဟာဟာဟာကိုငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာလှပဆုံးခန်းမပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ Archlinux မှာနေတယ်
ငါ desktop-level fragmentation ကိုစိတ်ထဲမထားသည့်တစ်ယောက်တည်းလား။ (upstart နှင့် systemd သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနည်းငယ်နှောင့်ယှက်သည်ဆိုပါက base system နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသောအရာများ၊ mir / wayland စသည်။ ) သို့သော် gnome အတွက် shell တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှအကွဲကွဲအပြားပြားများအော်ဟစ်နေသည်ဟုမထင်ပါ။
၎င်းသည် gnome အတွက် extillion ပေါင်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့ကိုယ်ပိုင် desktop version နှင့် extensions နှစ်ခုစလုံးတွင် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် version ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသူတို့သေချာပေါက်သတိပြုမိခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သာဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းကြီးမားသောမူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမျှမတွေ့ရပါ။ သို့သော်မူပိုင်ခွင့်ရှိပါက၎င်းသည်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်တွင်မတည်ရှိပါ။
ဗွီဒီယိုကိုကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပေမယ့်ဖမ်းယူမှုမှစပြီး Elementary OS ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပုံဖော်နိုင်ပါပြီ။ ငါ့ရိုးရှင်းတဲ့အမြင်
ခင်ဗျားအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော့်ကို Chrome OS အကြောင်းပိုမိုသတိရစေပါတယ်။
David valuja ဟုသူကပြောသည်
ကြီးမြတ်လိုက်လေခြင်း! ရာနှင့်ချီသော distros များ၊ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ၊ အသွင်အပြင်များ… GNU / Linux သည်မည်မျှကြီးသနည်း။ သို့သော်အခြား OS တစ်ခုနှင့်တူအောင်လုပ်ပါ။
David Valuja ကိုပြန်ပြောပါ
ငါကြိုးစားပြီးပြီ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် completely xd ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ပါ၊ မကြာမီတွင်ဤဖြန့်ကျက်မှုများထပ်မံကြိုးစားရန်မျှော်လင့်သော်လည်း Wayland XD
မင်းအကြောင်းကိုမင်းမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါဒေါင်းလုပ်မရဘူး။ : p, မင်္ဂလာပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုကောင်းစွာမကြည့်ရှုခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Archlinux ကိုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှစ်သက်သောသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း၎င်းအားမည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအသွင်အပြင်ကိုဂရုစိုက်ပါ၊ တရုတ်လူမျိုးများသည်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် Android ကိုအခြေခံသည့်ချက်ထားသော roms များကို MIUI ကိုကြည့်ပါ၊
@DanielC သင်အသုံးပြုနေသည့် operating system (သင်ခြွင်းချက်မရှိ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သူလျှိုလုပ်ခံရခြင်းခံရသည်နှင့်ပိုပြီးထိတွေ့မိသောကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်မိခြင်းကြောင့်တရုတ်အမှုသည်သူလျှိုမဟုတ်သောကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ အမှန်မှာ၊ စစ်အစိုးရက၎င်း၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုယူဆသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်သာထောင်အမိန့်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ပိုဆိုးတာကသင့်ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာကိုပြသတာကပိုဆိုးတယ်။
၎င်းသည် XD desktop မှတိုးချဲ့ထားသော ROSA panel နှင့် mandriva ကိုသတိရစေသည်
အဆိုပါ DDE ကောင်းတဲ့ O_o ကြည့်ရှုသည်။ ငါလိုချင်တယ်: D
ဟိုဆေး Arevalos placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ distro ကောင်းသောကြည့်ရှုခြင်း, ပြproblemနာအရင်းအမြစ်များမြင့်မားသောစားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်
Jose Arevalos သို့ပြန်သွားပါ
အကယ်၍ သင်၎င်းကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်လိုခြင်းမရှိပါကအခင်းအကျင်းနှင့်အိုင်ကွန်များကိုဤနေရာမှဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ စမ်းကြည့်နိုင်သည်
လူတိုင်းကိုသူလျှိုလုပ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြောင်းမင်းပြောနေတာမဟုတ်လား။ ? xD
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတစ်ပတ်လုံးလုံးအသုံးပြုနေပြီးကန္တာရရှိနောက်ဆုံးကိုကာကိုလာသော်လည်းအမှန်တကယ်အလွန်ဂရုစိုက်သည်။ သင်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်အရာအားလုံးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိခဲ့ပါ။ archlinux ... (ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး distro) နှင့်အတူ၊ ဥပမာကီးဘုတ်၏ multimedia ထိန်းချုပ်မှုသည်ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်သည်။ touchpad သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်သည်။ ubuntu စတိုင်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းတည်ငြိမ်မှု၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော dmusic ကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များ အခြားအမှုအရာတို့တွင် ... ။ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းဟာရွှေမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါမနှစ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်၊ မင်းမှာမော်နီတာနှစ်ခုရှိရင်ဒုတိယမော်နီတာကိုတိုးချဲ့တဲ့နည်း၊ အနည်းဆုံး၊ ဒုတိယမော်နီတာကိုတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်စက်ကနည်းနည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ zsnes ကစားရန် (သို့) မျက်နှာပြင်မှရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် Mirror mode တွင်သင်သုံးလျှင်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် taskbar အားပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်သောကြောင့် taskbar ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ငါသည်လည်းပြုပြင်ပြီးထင်မြင်ချက်မည်မျှရှိသည်ဆိုပါကနှစ်ပေါင်းများစွာ compiz နှင့်မည်မျှပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။ tint2 ကို တင်၍ မူလ taskbar ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် archinux သို့ tint2 နှင့်ပြန်လာသည်။ ငါအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည့် xfce, kde သည်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ gnome shell ကိုကျွန်ုပ်အလွန်မကြိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သောဖြန့်ဝေမှုများအားလုံးတွင်အကောင်းအဆိုးများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ လူတိုင်းကကျွန်တော့်အစ်ကိုနဲ့သူငယ်ချင်းစုံတွဲတစ်တွဲဆိုတာကိုမှတ်သားထိုက်ပါတယ် ရုံးကနေအခုမှစသုံးတယ် =)
ငါစမ်းတယ်၊ တော်တော်ကောင်းတယ်၊ ငါခဏသုံးမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်လုံးဝဘာသာပြန်လို့မရဘူး၊ အံ့သြစရာကောင်းတယ်။
အလွန်ကောင်းသောတင်ဆက်မှု၊ jass ဂီတ၏နောက်ခံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
ဂွာတီမာလာမှနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။ ကျွန်ုပ်၌ linux deepin ထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာလည်ပတ်သည်
luis fernando hernandez အားပြန်ကြားပါ
ဒါဟာငါကိုအလှဆုံး distro ပုံရသည်။ အဲဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ၎င်းတွင်“ ရိုးရှင်းမှုနှင့်ကြော့ရှင်းမှု” ပေါင်းစပ်မှုရှိသည် (90% လူအများကဲ့သို့) ။ ငါအံ့သြသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့တရုတ်ဟာပထမဆုံးစွမ်းအားပဲ။
လူများစွာ (CNN မှကျွေးမွေးသည်ဆိုပါစို့၊ တရုတ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြောဆိုကြသည်။ သို့သော်ဟေး၊ တရုတ်သည်အမေရိကန်ကိုယခင်ကစာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်သည်)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Linux China! =)
LibreOffice အတွက် "Flat" icon အသစ်များ